Broccoli uye apple cream - Thermomix Mapoka | ThermoRecipes
Broccoli uye cream cream
Makirimu40 maminitsi6 vanhu160 makarori
kubudikidza Ascen Jimenez
Yakapfava kwazvo, ine yakasarudzika mameseji uye yakatakurwa nezvinhu. Saka izvi zviri nyore kirimu broccoli neapuro izvo ndinokukurudzira kuti ugadzirire.
Asi ndisati ... dzokera pane zvakajairwa, mushure merwendo rwemheni kuenda kuValencia, ini handidi kumira kutenda vanhu vatiperekedza mu Ratidza Kubika. Zvaifadza kunakidzwa nekambani yako nekusangana nevamwe vevaverengi veduwe. Nenzira, Rosa, ndatenda nerudo rwako.
Izvo zvakandibatsirawo kupedza nguva inodakadza nevandaishanda navo uye kusangana MayraIwe unogona here kutenda kuti mushure memakore mashanu tichishanda pamwechete tanga tichiri kusangana mumunhu? Pakati pako neni ... ishamwari yakanaka.
Uye mushure meiyi ndima yandakaburitsa kwauri, ndiri kuenda neresipi. Kana iwe ukacherechedza, ini handisi bvudzi iro apuro, saka ndinochengeta zvese pectin uye ini ndinowana kuti iyo puree ine inoshamisa kuyevedza.
1 Broccoli uye cream cream
Smooth cream ine yakasarudzika mameseji akagadzirwa ne broccoli, apuro uye mbatatisi. Uye kana tikachiisa nechingwa chinokachidza ... chichava chisingadzivisike!
50 g hanyanisi
20 g yemamwe maorivhi emhandara emafuta
250 g ye broccoli
280 g ye mbatatisi yakasvuurwa
120 g apuro, yakachekwa uye isina kuvezwa
200 g yemvura
Mamwe mashizha eparsley
Isu tinoisa mafuta nehanyanisi mugirazi. Isu tinoronga 1 miniti, tembiricha yevaroma, kumhanya 4. Tevere isu chirongwa Maminitsi makumi maviri, tembiricha yevaroma, kumhanya 2.
Wedzera broccoli mumatete, mbatatisi yakasvuurwa nezvidimbu, apuro muzvidimbu, mukaka nemvura. Takabata beaker takaisa muchina mu vkumhanya 5 kwemasekondi matatu. Tinoronga gare gare Maminitsi makumi matatu, 30º, chipunu kumhanya uye isu takaisa castle panzvimbo yegapu.
Pakupera kwenguva, isu tinomirira zvishoma kuti tembiricha idonhe. Tinowedzera munyu uye grated nutmeg. Isu tinoronga 20 masekondi, kumhanya 10, nguva dzose nekapu uye akaibata.
Isu tinoshumira kirimu nezvidimbu zvechigunwe uye mashoma eparsley mashizha.
Mamwe mashoko - Pnhoroondo yaMayra Fernández Joglar, Chingwa chinotapira neapuro
Tsvaga mamwe mabikirwo e: Chikafu chine utano, Soup uye mafuta, Vegan, Muriwo
Yakazara nzira kuchinyorwa: thermorecipes » Special Recipes » Chikafu chine utano » Broccoli uye cream cream
Bhuruu Pixie akadaro
Mhoroi, mumwe munhu anogona kunditsanangurira nzira yekugadzira muto sosi kuitira kana chando chauya, gadzira mu thermomix
Pindura Blue Pixie
Thermomix mapepa akadaro
Ngatione kana uchida iyi: https://www.thermorecetas.com/receta-thermomix-caldo-de-pollo/
Pindura Thermomix Mapoka
Makorokoto pawebhu. Mumwe mubvunzo: unogona kubvisa apuro here? Pakadaro, iwe unofunga ndinofanira kuisa mamwe maapuro? Ndatenda
Ehe, kana iwe uchida iwe unogona kuita pasina iyo. Chinotsiva yakawanda broccoli (kana iwe uchida iyi veggie) kana zvimwe mbatatisi Kunyangwe nekaroti inogona zvakare kutaridzika zvakanaka ...
Maria Campos Perez akadaro
Mhoro. Handikwanise kumira mukaka. Ini ndinogona kuita ndisipo kana ndinofanira kutsiva chimwe chinhu?
Pindura María Campos Pérez
Tony Salguero Villalobos akadaro
Handizive kana uchifarira mukaka wakabuda mhute, ndinofunga kuti ungatsiviwa nawo kana kirimu, pane muriwo unopa mhedzisiro. Ini ndinozvitsiva pachinzvimbo cheyakajairwa kirimu kubvisa mafuta kubva mundiro uye zvinondipa mhedzisiro. Ndinovimba zvinokubatsira.
Pindura Tony Salguero Villalobos
Handikwanise kumira kuravira kwemukaka. Uye zvimwe chete zvinoitika nekirimu. Ini ndinonzwisisa kuti zvinogona kunge vari kuti vanoshandisa mukaka kana kirimu kuita mukirimu? Ndingaisa mamwe matapiri here?
María Campos Perez Tsiva nemuriwo muto, zvotaridzika zvakanaka pauri
Nyasha Gla Barros De la Rosa akadaro
Akanaka kwazvo Anita, akanaka sei ??????
Pindura kuna Nyasha Gla Barros De la Rosa
Erika Escript Martinez akadaro
Asi unozvida here, ini ndinosarudza zvimwe zvinhu
Pindura kuna Erika Escrib Martinez
Zvinotaridza kwandiri kunge zvinonakidza kusangana, zvinoita kwandiri kuti inofanirwa kuve kirimu inofarirwa nevana nevakuru. Zvakanaka here kupisa uye kutonhora?
Hongu, kumba vadiki vangu vakadya vachifara 😉 Zvekuti ingave inotonhora kana kupisa ... inonaka munzira mbiri, munguva yechando inonzwa kudziya uye muzhizha kunotonhora, asi ndozvamunofarira zvakanyanya.
Galian Sea akadaro
Ini ndangozviita manheru ano, zvakanaka !!!!
Pindura Mar Galián
Zvakanaka, Mar !!!
Lorraine Paula akadaro
Ndakazviedza uye zvakanaka kwazvo, vanasikana vangu vakazvida! hapasisina "kurwa" kuti vadye broccoli
Pindura kuna Lorena De Paula
Ndiri kufara sei, Lorena 🙂 Ndatenda !!
Ndinoda kuziva kuti nderipi apuro rawakashandisa.
Ini ndinoshandisa Goridhe asi iwe unogona zvakare kushandisa imwe dzakasiyana.
Gonzalo Martinez Andrés akadaro
Mhoroi, ndiri Gonxo. Ndinoda kuziva kana iwe uchibika iyo broccoli kutanga kana kuiwedzera sezvazviri. Ndatenda.
Pindura Gonzalo Martínez Andrés
Inokandwa sezviri mugirazi, mumabouquets. Ndinovimba unoifarira 🙂
Ndatenda zvikuru nhasi ndichaigadzirira uye ndichakuudza nezvazvo. Shuwiro yakanakisa.
Ndatenda zvikuru Ascen. Shuwiro yakanakisa.
Ndiri kufara sei, Gonzalo. Ndatenda!
Ndanga ndichifarira Thermomix yangu kwemazuva mashanu?
Ndakagadzira muto we zucchini, squash yekuItaly tinovadaidza muno muChile, murume wangu nevasikana vangu vakafara !!!
Iyi broccoli uye muto wemaapuro, iyo yegoridhe apuro ndiyo imwe yero inopfuura yeruvara, handiti? Neyakajairika green green, ichaita seyakanaka pandiri?
Ndichaonga iwe unogona kundipindura
Ehe, hongu, iyo yegoridhe ndiyo yaunotaura. Asi zvinotaridzika zvakanaka nemhando dzose 🙂
Zvakanaka! Nyowani Thermomix! Zvakanaka, iwe unoziva, pano une isu pane zvaunoda. Isu tinodhindisa mabikirwo zuva rega rega kuti usashaye mazano mazano
Mhoroi, ndaifanira kuiisa pamadhigirii makumi mapfumbamwe, zvakanaka pa90, mukaka wangu wamuka uye wafashukira.
Hasha dzakadii! Waita zvakanaka kudzikisa tembiricha. Dzimwe nguva izvo zvinoitika nemamwe mapapiro. Ini ndinofunga zvinogona kunge zviri nekuda kwehukuru hwezvigadzirwa ...
Ndinofanira kutaura kuti kunyangwe ndisingashiviriri broccoli uye ndichifunga nzira churu dzekuiisa mukudya kwangu NDAKAIDA! Saka makorokoto paresipi! Wakandibata kuti ndiitore ndisingatombozviziva! Saka ini ndatova neresipi yakachengetedzwa zvakanaka !!! ?
Mukuru, Esther !! Ndafarira comment yako 🙂
Artichokes ne green muto nemachongwe
Vechidiki hupamhi bhinzi nemaseji eropa